Ireo teknisianina mpisehatra amin’ny ranomasina sy ireo mpanatanteraka ny asa famonjena aina no niatrika izany. Atrikasa haharitra hatramin’ny 5 martsa izay hisian’ny fiaraha-miasa amin’ireo mpampiofana sy ireo manampahaizana manokana ny amin’ny vonjy aina eny an-dranomasina. Tsiahivina fa misy ireo lalàna mifehy ny ranomasina avy amin’ny fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny fitaterana an-dranomasina (OMI) izay tsy maintsy aharahin’ireo firenena mikambana ao ka anisan’izany i Madagasikara. Tsy mijanona fotsiny amin’ny famonjena aina sy ny fanarahana ireo lalàna ity atrikasa ity fa eo ihany koa ny fihainoana ny olana mahazo ny sambo mandalo rehetra eto Madagasikara izay an’ireo firenena mikambana ao amin’ny OMI. Araka izany dia misy ny faritra tokony hofehezin’ny Malagasy izay mahatratra hatrany amin’ny 2 tapitrisa m² tokony hosahanina ary hanatanterahana ny famonjena aina. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ireo firenena avy any ivelany, indrindra ny amin’ny fikirakirana ireo teknolojia vaovao. Lehibe sy midadasika ny ranomasina sahanin’ny Malagasy ka ilaina hatrany ny fifanomezan-tanana sy ny fifehezana ireo teknolojia vaovao misy. Tsy maintsy mianatra sy mifehy izany i Madagasikara ary mila teknisianina maro ny amin’ny fikirakirana ny fitaovana rehetra. Anisan’izany ny fahaiza-manao tokony hananana mahakasika ny nametrahana ny MRCC (Maritime Rescue Coordination Center) izay ahafahana mahita sy manaraka ny toerana misy sambo manana olana mba hanavotana azy.